promoting Utopian's Indiegogo Campaign in myanmar — Steemit
promoting Utopian's Indiegogo Campaign in myanmar
mmunited (63) in myanmar •3months ago
I will write this post in myanmar language in order to promote this project in myanmar. Please read this link if your are notamyanmar languare users.
စတီးမစ် သုံးစွဲသူများ မင်္ဂလာပါ။ utopian -io ရဲ့ နောက်ဆုံး ပေါ်ဖြစ်တဲ့ Indiegogo ကမ်းပိန်းကို လူသိများအောင် လုပ်ဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ ဒီမှာ ရှိနေခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ ကမ်းပိန်းကို ပါဝင် ဆင်နွှဲခြင်း မပြုခင်မှာ အောက်ပါ လမ်းညွှန်ချက်တွေနဲ့ လိုက်နာရမည့် စည်းမျည်းတွေကို သေသေချာချာ ဖတ်ရှုစေလိုပါတယ်။
စည်းမျည်းတွေကို လိုက်နာပြီး ရေးသားထားတဲ့ မှတ်ချက်တွေသည် အနည်းဆုံး ၁% အများဆုံး ၂% အထိ အပ်ဗုတ်ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂% အပ်ဗုတ်က တစ်ဒေါ်လာ တန် အပ်ဗုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အနည်းငယ်လျော့နိုင်ပါတယ်။
ဒီအကြောင်းကို ပိုစ့်တင်ပြီး ရေးသားမယ် ဆိုရင်တော့ ရေးသူရဲ့ အရည်အသွေးနဲ့ ပြန့်နှံ့မှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့ အပ်ဗုတ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအပြင် utopian ရဲ့ အပ်ဗုတ်ပါ ရဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Mar လ နှစ်ရက်နေ့က စပြီးတော့ march လ ကိုးရက်နေ့ အထိ ဖြစ်ပါတယ်။
utopain's ရဲ့ indiegogo ကမ်းပိန်းကို steemit မှာနဲ့ အခြား social media တွေ မှာပါ လူသိများအောင် လုပ်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ကမ်ပိန်း ပေ့စ့်ကို သွားပါ။ ဒီလင့်ခ်ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ပြီးတာနဲ့ အသည်းပုံလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ။ အနီရောင် ပြောင်းသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို နှိပ်ဖို့ ဆိုရင် facebook အကောင့်နဲ့ login ဝင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ အနီရောင် ပြောင်းသွားတဲ့ ပုံကို screenshot ရိုက်ထားပါ။
နောက်တစ်ဆင့်မှာ ကတော့ သူ့ဘေးမှာ ရှိတဲ့ facebook ပုံလေးကို နှိပ်ပြီး ရှယ်ယာလုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ထည့်ချင်တဲ့ စာသား အချို့ ထပ်ထည့်နိုင်ပါတယ်။ အရမ်းကြီးလဲ မများပါစေနဲ့
ဒီအဆင့်မှာ ကတော့ facebook button ရဲ့ ဘေးမှာ ရှိတဲ့ twitter botton လေးကို နှိပ်ပြီး share လုပ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအဆင့်တွေ တွေ လုပ်ပြီးသွားရင်တော့ orcale-d ရဲ့ 2% အပ်ဗုတ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ကယ်လို့ social media တစ်ခုဥပမာ facebook မှာပဲ share လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ 1% အပ်ဗုတ်ပဲ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခြား ပလက်ဖောင်းတွေမှာ ပါ share လုပ်ရင်တော့ ပိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ မူရင်းပိုစ့် ကို အပ်ဗုတ်နဲ့ resteem လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ မန့်ကိုလဲ အဲဒီမှာ ရေးရမှာပါ။
Utopian ရဲ့ ပိုစ့် ကိုလဲ အပ်ဗုတ်နဲ့ resteem လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။
အပေါ်က အဆင့်တွေကို ကိုယ်လုပ်ထားတယ်ဆိုတာကို သက်သေပြဖို့ အတွက် လင့်ခ် ဒါမှမဟုတ် screenshot တွေကို သူ့ရဲ့ ပိုစ့်မှာ မှတ်ချက်ပေးဖို့လိုပါတယ်။
ဒီ ကမ်ပိန်းကိ လူသိများအောင် လုပ်ဖို့အတွက် blog ဒါမှမဟုတ် vlog တစ်ခုပြုလုပ်ပါ။ အဲဒီ blog မှာ လူတွေကို ဒီ ကမ်ပိန်းကို လှူဒါန်းကြဖို့၊ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြဖို့ တိုက်တွန်းရေးသားပေးပါ။ အဲဒီ blog မှာ အောက်ပါ tag တွေကို ထည့်ပေးပါ။ #UtopianColony, #OpenSource, #OpenSourceCommunity
အပေါ်က banner ကိုလဲ ကိုယ့်ရဲ့ ဘလော့မှာ သုံးလို့ရပါတယ်။
Twitter မှာ share လုပ်မယ်ဆိုရင် #UtopianColony, #OpenSource, #OpenSourceCommunity စတာတွေ ထည့်ပေးရမှာ ဖြစ်သလို @utopian-io ဆိုတာကိုလဲ ထည့်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အောက် မှာ ပုံ အချို့ ကို န မူ နာ ထည့် ပေး လိုက် ပါ တယ်။
အ ပေါ် က ပုံ က တော့ အ သည်း ပုံ လေး ကို နှိပ် ရ မည့် ပုံ ဖြစ် ပါ တယ်။ အ ရင် ဆုံး facebook နဲ့ ဝင် ဖို့ လို ပါ တယ်။
အ ပေါ် က ပုံ က တော့ facebook မှာ ရှယ် ထား တဲ့ ပုံ ဖြစ် ပါ တယ်
အ ပေါ် က ပုံ က တော့ twitter မှာ ရှယ် ထား တဲ့ ပုံ ဖြစ် ပါ တယ်
အောက် မှာ ရေး ထား တဲ့ စာ တွေ က တော့ တစ် လုံး ချင်း စီ ဖြစ် သွား ပါ တယ်။ သူ က အ နည်း ဆုံး စာ လုံး ရေ ၆၀၀ ရေး ရ မယ် လို့ ဆို ထား တဲ့ အ တွက် ချဲ ပြီး ရေး ထား တာ ဖြစ် ပါ တယ်။
သူ့ ပိုစ့် မှာ comment ပေး ထား တဲ့ လင့်ခ် ဒါ မှ မ ဟုတ် screenshot ကို ဒီ ပိုစ့် မှာ ကွန့် မန့် လာ ပေး စေ ချင် ပါ တယ်။
ဒီ ပိုစ့် မှာ ရေး ထား တဲ့ အ ချက် တွေ က ရှင်း လင်း မယ် လို့ ထင် ပါ တယ်။ twitter မှာ ရှယ် တဲ့ အ ခါ ပဲ သ တိ ထား ရ မှာ ပါ။ သူ ထည့် ခိုင်း တဲ့ tag တွေ က တစ် ခါ ထဲ ပေါင်း ထည့် လို့ မ ရ ပါ ဘူး။ စာ လုံး တွေ ကြား ထဲ မှာ ရော ပြီ ထည့် ပေး ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။
ပိုစ့် တင် ရ တာ က တော့ အ တော် လေး ကို ခက် ပါ တယ်။ စာ လုံး ရေ ခြောက် ရာ ပြည့် အောင် အ တော် လေး ကို ရေး ရ ပါ တယ်။ စာ လုံး တွေ ကို ခြား ပြီး ရေး ရင် တော့ စာ လုံး တစ် လုံး ကို စ ကား လုံး တစ် ခု လို့ မှတ် ယူ ပါ တယ်။ ကွန့် မန့် တစ် ခု နဲ့ တစ် ဒေါ် လာ ကျော် ရ တယ် ဆို တော့ မ ဆိုး လှ ဘူး လို့ ထင် ပါ တယ်။
@aggamun, @bobokyaw, @mamamyanmar, @minsoenaing, @mm7, @htwegyi, @hein.khant, @billionerhein, @sanhtun, @naythan, @thura, @ayethatmon, @susuhlaing, @pyaesonekhinkhin, @julia-rain, @nightgirl, @nayhlaingsoe, @lwanwai, @yethihakyaw, @evernew, @khaylay, @sawlwin. ဒီ mention ခေါ် တဲ့ အ ထဲ မှာ မ ပါ တဲ့ သူ တွေ ကို လဲ သိ စေ ချင် ပါ တယ်။ အ ကုန် လုံး ကို mention ခေါ် လိုက် ရင် လဲ mention နဲ့ တင် ပိုစ့် ပြည့် သွား မှာ စိုး လို့ ပါ။
Please comment on my post. @automation, @banjo, @cleverbot.
Posted from my blog with SteemPress : http://steemhosting.com/myanmarpress/?p=17
myanmar opensource opensourcecommunity steempress utopiancolony
3 months ago by mmunited (63)
အ ပေါ် က လင့်ခ် မှာ ပြ ထား သ လို ကွန့် မန့် ကို ကူး ချင် တယ် ဆို ရင် အောက် က ပုံ မှာ မြှား ပြ ထား တဲ့ နေ ရာ ကို right click နဲ့ နှိပ်ပြီး ကူး ယူ ပါ။
We did not even talk.
I don't even know what's meant by that. Isasoul real?
နည်းနည်းတော့ ရှုပ်တယ်ဗျာ။ သေသေချာချာ ပြန်ဖတ်ပြီးမှ လာမေးတော့မယ် ဘဒို
ရှုပ်နေတာလေးတွေကို တစ်စစီ ဆွဲထုတ်လိုက်ပါ။ အဲဒါဆိုရင် ရှင်းသွားမှာပါ။ စာလုံးမဲလေးတွေကို သေချာဖတ်ပါ ဘရို။
ကျနော်တော့ တတ်သလောက် မှတ်သလောက် လုပ်လိုက်ပီ ဘဒိုရေ 😀
I will think about that forawhile but for now lets change topics.